Okusanda okugeza kancane kancane yadedela eshaweni. Ngenxa yobukhulu encane zangasese, kufanele ugcine zonke imitha. Ngakho-ke, abaningi baye bathola okunye okuhle. Shower ezihlukanisa amahhovisi emfishane (ngokuya ngosayizi), futhi imisebenzi engaphezu kuka-kubhavu. Nokho, esimweni ngasinye has ubuhle nobubi bayo. Sizozama ukuthola kwabo besebenzisa izibuyekezo izihlambi labo baye kudala ukuzisebenzisa.
Le nsiza kubalandeli ukuthi ushawa e Ekuseni nantambama, kufanelana ngokuphelele. Uma une isimo ngokokwelashwa iyakwenqabela ukugeza umzimba ngamanzi, ukufakwa gumbi - futhi isinqumo esifanele.
Enye inzuzo ukuthi wokusindisa amanzi. Lapho senza umphefumulo wakhe ibusa kancane mayelana izikhathi eziyisihlanu. Ukuze ushawa, udinga ukuchitha isikhathi esingaphansi ukugeza umzimba ngamanzi. Shower ezihlukanisa amahhovisi kufanelekile labo obakhathalelayo ohlangothini inhlanzeko zalolu daba. Zonke ukungcola zakhukhula ngamanzi agobhozayo futhi angami.
Kodwa inzuzo enkulu ukuthi ilondoloza isikhala. Uphenyo izihlambi uqinisekise lezi zinzuzo.
Nokho, kukhona embi ngalo. Kuye izinga lamanzi, kungase kuqubuke izinkinga ne-operation ye-cab. Plaque netshe amanzi kungonakalisa eshaweni amakhanda, bayoba ukushintsha.
Izibuyekezo ze-eshaweni - lena indlela engcono kakhulu ukuze ufunde mayelana nezinkinga eziba khona inkambo nokusebenza kwabo. Abasebenzisi abaningi babika ukuthi le yokugezela accessory ye kudinga ukunakekelwa ngaphezu okugeza. Ngemva ukusetshenziswa ngayinye, eshaweni kufanele kahle wageza akukho iminonjana amanzi futhi dampness. Uma ungaphenduki, ke esikhathini esizayo kuyoba nzima ukuhlanza futhi kukhanye. Ngaphezu kwalokho, zingase zimiswe isikhunta futhi ukhunta. Ukuze ugweme izinkinga, kungenzeka ukufaka okuhlungayo amanzi.
Ngaphambi kokufaka eshaweni, kufanele unqume ku ezakheke kanye nosayizi. It angavulwa kancane noma ivaliwe ngokuphelele, okuyinto kuvimbela ngisho esidayisa umusi egumbini lokugezela. izihlambi Iminyango ngokuvamile ingilazi, kodwa ezindaweni zawo kungaba esobala, roughened noma mnyama. Iminyango kungenzeka eziningana. Futhi avulekele phandle noma beya.
Pallet eshaweni ebiyelwe kungaba ezakheke ehlukahlukene, kodwa futhi ukuba izinga layo eziphoqelelwe ezinye izidingo. Okokuqala, kuba amandla futhi ezifweni ongaphakeme umonakalo lokukhanda. Kufanele kube lula nakakhulu ukuxoxa nabo futhi ube nesikhathi ongeke ukubukeka yobuhle. Indawo yayo kwangaphakathi kumele ezimazombezombe ukugwema ilele. I Pallet kungenzeka ezenziwe ngensimbi, imifekethiso, ngobumba, noma Acryl.
Isici esiphawulekayo izihlambi kuyinto yizinhlobonhlobo yabo. Kuye ukumisa kanye imodeli, ingasetshenziswa njengendlela okugeza Turkish. Abanye babe umsebenzi Hydro-massage. Amanzi Kulokhu ivela injectors, okungase esisogwini izindonga side.
Abanye onobuhle anemisila idivayisi esikhethekile bazihlikihle izinyawo.
Uma ukuthenga kubalulekile ukucabangela izibuyekezo izihlambi ukwenza ukukhetha okufanele.
Yokugezela owufanelekela. I okugeza oluncamelayo, eshaweni ugqoko noma eshaweni?
I-Lenin Library. I-Moscow Lenin Library
"Bepanten" izidakamizwa. Yokusetshenziswa
Samsung Galaxy J1: ukubuyekezwa. "I-Samsung Galaxy J1": incazelo, izici